फ्रान्स च्यानल वा riverboat लागि धेरै सम्भव गन्तव्यका साथ एक सुन्दर देश हो छुट्टी. फ्रान्स गरेको क्षेत्रहरु को केही भन्ने सन्दर्भमा बाहिर खडा: को Midi, एक्वाटाइन को क्षेत्र, र क्यामरगुइ. तिनीहरूलाई प्रत्येक अद्वितीय गुणहरू छन्.
पहिलो छ नहर डु Midi, एक विश्व विरासत साइट र युरोप मा सबै भन्दा पुराना कृत्रिम waterway अझै पनि यसको मूल पाठ्यक्रम निम्नानुसार कि. पियरे पॉल राइकेटको यो काम सम्पन्न भयो 1681. बाटो साथ, को Midi तल cruising, तपाईं Le Somail र Carcassonne देख्न सक्नुहुन्छ, दुई आकर्षक मध्ययुगीन बस्तियों. र यदि तपाईं प्रेम राम्रो खाना र ठूलो रक्सी, तपाईं Midi गरेको प्रसिद्ध MINERVOIS र Corbieres प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, र cassoulet, एक स्थानीय विनम्रता.
के विशेष गरी आकर्षक बाटो साथ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि छ आश्चर्यजनक महलों, मध्ययुगीन महल, र विचित्र पुरानो सहर. र जसले प्रकृति मन पराउछन् निस्सन्देह यो unpoiled उजाड र को मजा हुनेछ वन्यजन्तुको समृद्धि.
त्यसपछि Ypres छ, एक आश्चर्यजनक ठाउँ ऐतिहासिक महत्त्व र अद्वितीय फ्लेमिश ठाँउहरु को पूर्ण, ध्वनि, र स्वाद. स्वादिष्ट बेल्जियम आफ्नो बाटो सेल हस्तनिर्मित चकलेट, जीवंत र मजबूत वा बेल्जियम बियर. देशले तपाईंलाई सबै इन्द्रियहरूका लागि शुद्ध खुशीको साथ स्वागत गर्दछ.
कुनै सूची छैन सबै भन्दा राम्रो युरोपेली गन्तव्यहरू नेदरल्यान्ड बिना पूर्ण हुन सक्छ. त्यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो च्यानल र riverboat बिदा प्रस्ताव गन्तव्यहरू समावेश. waterways को देश सूची यसको स्थान फेला पार्न थियो, यसको आश्चर्यजनक दृश्य गर्न owing, सुंदर मार्गहरू, यस सजिलो र जलयात्रा को सौहार्द र.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#नहर #नदी डु .्गा #यात्रा europetrains eurotrip trainjourney